Maxey Shirka Guriceel uga hadleen Ahlusunah & Itoobiya?
Monday June 25, 2012 - 18:01:02 in Wararka by Xarunta Dhexe
Wararka ka soo baxaya degmada Guri-ceel ee gobollka Galguduud ayaa sheegaya in saraaakiil Itoobiyaan ah iyo mas’uuliyiinta ka tirsan Ahlu Sunna Waljameeca uu wada hadal uga bilaawday degmada.
Wararka ka soo baxaya degmada Guri-ceel ee gobollka Galguduud ayaa sheegaya in saraaakiil Itoobiyaan ah iyo mas’uuliyiinta ka tirsan Ahlu Sunna Waljameeca uu wada hadal uga bilaawday degmada. Wararku waxaa ay intaa ku darrayaan in kulanka dhaxmaraya labada dhinac intiisa badan looga hadllayo xaalada nabad-galyo ee gobollka iyo sidii ay dib ugu laaban lahaayeen goobihii ay dhawaan isaga soo baxeen ee ka tirsan gobollka Galguduud.
Maxey salka ku heesaa Booqashadi Madaxweyne Guudlaawe?
Sawirro:-Wasiir Cawad oo Khudbad xasaasi ah ka jeediyey shirka Golaha Guud ee QM
30/09/2018 - 12:09:00